အမေရိက သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် မရှိနိုင်တော့မယ့် Ford Mustang Mach-E ! – MyMedia Myanmar
အမေရိက သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် မရှိနိုင်တော့မယ့် Ford Mustang Mach-E !
2021 Ford Mustang Mach-E အမျိုးအစားကတော့ Home Grown မဖြစ်ဆုံးကား တစ်စီးအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်လို မျိုး Mustang တွေ ကို ထုတ်လုပ်နေကျ ဖြစ်တဲ့ Michigan ပြည်နယ်က Dearborn မှာ ဆောက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲ All Electric Mach-E ကားကိုတော့ မက္ကဆီကို နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Ford ရဲ့ Cuautitlan စက်ရုံမှာ ဆက်လက်တည်ဆောက် ထုတ်လုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mach-E အမျိုးအစားကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ အစီးရေ ၃ စီးပဲ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုကိုဗစ်ကာလ အလွန်ကို ရောက်ရှိလာ တော့မယ့် အခြေအနေမှာ ပြန်လည် အဖြေရှာပြီး တိုးတက်ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ဖို့ အတွက် Ford ဘက်က ပြင်ဆင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ထဲက လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အတွက် Ford ဟာ သူတို့ရဲ့ Mach-E တည်ဆောက်မှုကို တရုတ်နိုင်ငံအထိ ဖြန့်ကျက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ စီစဉ်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို လုပ်ဆောင်မှုကတော့ Mustang ကား အမျိုးအစားတွေကို အမေရိက ပြင်ပမှာ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ် လာမယ့် အနေအထားတစ်ရပ် ကို ရောက်ရှိလာမှာပါ။ ရှင်းလင်းအောင် ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ Ford ဟာ သူတို့ရဲ့ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်အတွက် Mach-E ကား တွေကို Cuautitlan စက်ရုံမှာ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး ‌ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် ကားတွေကို ပဲ တရုတ်နိုင်ငံမှာ သီးသန့် ထုတ် လုပ်မှာဖြစ်ကာ အခုနှစ် နှောင်းပိုင်းလောက်မှာတင် စတင်ရောင်းချလာနိုင်ပါတယ်။ အခု လိုမျိုး Mach-E ကို တရုတ်ဆီသို့ ခြေချခြင်းက တော့ Ford ရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဗျူဟာကို ခင်းကျင်းတာလည်းဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အဆင့်မြင့်မားတဲ့ နည်းပညာ တွေနဲ့ ယာဉ်တွေကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်းက ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ အထိပါ ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဈေးကွက်ထဲက Mach-E ကို ဝယ်ယူလို သူတွေ အတွက်ကတော့ ကားမှာ ပါဝင်မယ့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာတွေကို အတူတူပဲ ရရှိခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲမှာ ဆိုရင် Ford Co-Pilot 360 Suite လည်းပါဝင်ကာ Driver Assist နည်းပညာကိုလည်း Level2အဆင့်ရှိ မောင်းသူမဲ့စနစ်နဲ့အတူ ထည့်သွင်းတပ်ဆင် ပေးထားမှာပါ။ Ford ရဲ့ အဆိုအရတော့ Mach-E ဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ စတင်ထုတ်လုပ်မယ့် ပထမဆုံးကား ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး Cellular Vehicle-To-Everything ဆိုတဲ့ ( C-V2X ) နည်းပညာကို အသုံးပြုတည်ဆောက် လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ နည်းပညာကတော့ ကားတစ်စီး အတွင်းကနေ အခြားသော ကားတစ်စီးကို ဆက်သွယ် ပြောကြားနိုင်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ အတွက် ကြုံတွေ့လာနိုင်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာရပ်တွေကိုလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးရာ ရောက်ပါ တယ်။
မြောက်အမေရိကမှာ ထုတ်လုပ်မယ့် Mach-E လိုမျိုးပဲ အခု တရုတ်ဈေးကွက်အတွင်း ထုတ်လုပ်မယ့် ကားအသစ်ဟာ ဆိုရင် Over The Air Update တွေကို အမြဲလိုလို တစ်ပြေးညီ ရရှိလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ ဘက်ထရီ စွမ်းအင်အပိုင်းနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ Ford ဟာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 600 km အထက် ( 373 Miles ခန့် ) ပမာဏလောက်ကို Range ရှိလာ ဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ အနေ အထား အတိုင်းသာ ဆိုရင်တော့ အမေရိက Model ရဲ့ 300 Mile Capacity ထက် တော့ ပိုများ နေတာကို တွေ့ရပေမယ့် တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းတာမှု စံတစ်ချို့ကတော့ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်တာ ကို သတိပြုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်ဈေးကွက် အနေနဲ့‌ကတော့ Stateside ရဲ့ အခြားသော အပြင်ဘက်မှာ ထုတ်လုပ်လာဦးမယ့် Mach-E Variant တွေကိုလည်း ရရှိလာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပြီး GR Performance Edition ရဲ့ ပြည်တွင်းထုတ် Version ကိုလည်း မြင်တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တော့ အခုလိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ Mach-E အမျိုးအ စားဟာဆိုရင် 480 hp နဲ့ 634 lb-ft Torque အထိ စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၃.၅ စက္ကန့် လောက် အတွင်းမှာတင်ပဲ 60 mph အထိ မောင်းနှင်နိုင်မှာကို လည်းအထင်ကြီးဖွယ် မြင်တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အမေရိက သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် မရှိနိုင်တော့မယ့် Ford Mustang Mach-E ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-30T12:00:41+06:30January 30th, 2021|MYCARS MYANMAR|